‘प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति गो’लि खान तयार छौं’ – Everest Pati
काठमाडौँ। अनेरास्वियूका केन्द्रीय सदस्य नेत्र मैनालीले प्रधानमन्त्रीका निम्ति गो’लि खान तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। भ्रष्टचा’र, दला’ल र विचौलियाको विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका नेता मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति गो’लि खानु परे आफू थाप्न तयार रहेको भन्दै उनले केही सर्तहरु अघि सारेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘हामी तपाईंको निम्ति गो’लि थाप्न तयार छौं। तर, तपाईंको निशान दलाल, नोकरशाही, पूँजीपति र अनि भ्रष्टचारका वि’रुद्ध हुनुपर्यो।’ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति नेकपाका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो पद त्याग गर्न मात्रै होईन धरहराबाट हाम फाल्नसमेत तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको पद त्याग्छु भनेका थिए। त्यस्तै नेकपाका केस महेश बस्नेतले ओलीले भन्छन् भने धरहराबाट हा’म फाल्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यस्तै आज अनेरास्ववियूका नेता मैनालीले गो’लि था’प्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यु हामी तपाईंको निम्ति गोलि थाप्न तयार छौं। तर, हामी यो पनि चाहान्छौं, कि तपाईंको निशान दलाल, नोकरशाही, पूँजीपती अनि भ्रष्टचारका विरु’द्ध अचुक हुनुपर्यो।’
यो पनि पढ्नुहोस: माधव क. गल्ती नगर्नुस्, तपाईलाई इतिहासले सलाम ठोकेको हेर्ने मन छ केहि मनुवाहरु भन्न थालेछन किन माधव नेपालले कम्रेड केपि ओलीलाई जोगाइदिनु पर्ने ? कठै धतुरेहरुको मानसिकता बरु हाम्रो चाहाना हो, उनी प्रचण्डको घोडा नबनुन ।
हामीलाई केपी ओलि पछि क. माधव नै अध्यक्ष अनि प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने रहर छ, किनकि दोस्रो पुस्ताले हिम्मतै गरिरहेको छैन । तसर्थ यति कुरा याद रहोस्, केपि ओली सक्ने अभियानमा लागे भने केपी ओली सकिदैनन, किनकि उहाँ त एउटा युग पुरुष हो ।
उहाँ समाप्त हुँदा एउटा युगनै सकिन्छ । अझ उहाँलाई त बरु झन ठुलो साथ समर्थन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको मिलिरहेको छ । हिजो ती प्रचण्ड कित्ताका हुन या माधव कित्ता वा बामदेब वा झलनाथ कित्ताका । यसकारण कि, यो जनमतको धेरै हिस्सा उहाँको नाम सङ्ग जोडिन्छ।
कसैले मानुन या नमानुन तर जनता यहि मान्दछ । त्यसैले कम्रेड माधव नेपाल ज्यु ! हिजो के भयो त्यो छोडौ तपाईं पनि जिवनको पछिल्लै मोडमा हुनुहुन्छ यो बेला महाभुल नगर्नुस् ता कि इतिहासले धिक्कारोस ।
मलाई त इतिहासले तपाईलाई सलाम ठोकेको हेर्ने मन छ। अब तपाईको बिचार के छ ? त्यो तपाईंलाई थाहा होला तर एउटा कार्यकर्ताले चिन्ता प्रकट गर्नु शायद नराम्रो नहोला भन्ने मेरो बुझाई हो हुन सक्छ मेरो बुझाई कमसल वा नम्बर १ त्यो त चेतनामा निर्भर रहने कुरा हो। जय स्वाभिमान ! नेत्र मैनाली (केन्द्रिय सदस्य, अनेरास्ववियु)
किम जोन रोएको त्यो क्षण …